Ebe nkwalite akpụkpọ ụkwụ nke Sandal na -etinye ego dị mkpa na ntinye ego nke Caribbean
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Ebe nkwalite akpụkpọ ụkwụ nke Sandal na -etinye ego dị mkpa na ntinye ego nke Caribbean
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem
10 min gụọ
Sandals Resorts International (SRI) kwupụtara emume ncheta afọ iri anọ nke akara flagship ya maka ndị lụrụ di na nwunye naanị. Kemgbe emepere ọnụ ụzọ ya na Montego Bay na Nọvemba 40, 27, Sandals Resorts nwere obi ụtọ ndị ọbịa, soro ndị ndụmọdụ njem, wee nyere aka wulite njem njem na Caribbean niile, ebe ọ na -agba mbọ ịzụlite ọmarịcha ile ọbịa n'ofe mpaghara ahụ, otu n'ime ndị kacha hụ n'anya na njem nlegharị anya na -agbanwe agbanwe n'ụwa.
Ụlọ ọrụ ezumike okomoko na-eme ememme afọ iri anọ nke ile ọbịa nke ọma.
Ọ na -echeta ihe nketa nke onye guzobere ya bụ mbubreyo Gordon “Butch” Stewart ”na ịtọ ntọala maka ọdịnihu.
Ụlọ oriri na ọ Sandụ Sandụ Sandals mara ọkwa ụlọ akwụkwọ ọhụrụ nke ile ọbịa, 40 njem nlegharị anya nke ndị obodo Caribbean, ememme gburugburu, na ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka okomoko niile na-eme ememme ncheta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke Sandals site n'ịsọpụrụ ihe nketa nke onye guzobere ya, Gordon 'Butch' Stewart nwụrụ anwụ, na-enwu ọkụ na mmetụta njem na-eme na mpaghara Caribbean mpaghara, na-emegharị elekere ahụ na-atọ ụtọ. gafee Ogwe akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ niile, ọ ga -aga n'ihu na ihe ịtụnanya ndị ọzọ a ga -ekpughere n'ime afọ niile.
Onye isi oche SRI Adam Stewart kwuru, "Afọ a bụ ihe pụrụ iche dị ịrịba ama maka ebe a na -ere akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ọ bara uru nke ukwuu ka anyị na -ewepụta oge a ịkwanyere ihe nna m kere ma na -eme ihe nsọpụrụ ya n'ofe Caribbean." “Kemgbe mmalite flagship ahụ na 1981 na Sandal Montego Bay, anyị gara n'ihu na-ebuli elu ma na-eduga oghere ntụrụndụ niile. Karịa nke ahụ, anyị egosila na ụfọdụ ihe ọhụrụ na -atọ ụtọ ma na -adịgide adịgide nke ụlọ ọrụ ahụ ka emepụtara na Caribbean. Obi dị m ụtọ ime mmemme a dị mkpa maka ụlọ ọrụ anyị n'akụkụ ezinụlọ Sandals anyị ka anyị na -ele anya afọ 40 na -abịanụ kpughere ọhụụ Caribbean na ihe ọhụrụ. "
N'ịsọpụrụ ncheta afọ 40 ya, Sandals Resorts dị mpako ịkpọsa:
Gordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism
N'ịsọpụrụ onye nchigharị Sandals Gordon “Butch” Stewart na mmụọ azụmaahịa ya na nkwenye ogologo ndụ na ike agụmakwụkwọ, Sandals Resorts International na -ekwupụta iwu Gordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism na Mahadum nke West Indies (UWI) yana yana ụlọ akwụkwọ mahadum Chaplin nke Florida International University (FIU) nke ile ọbịa & Njem nlegharị anya. Ndị isi abụọ na agụmakwụkwọ njem, FIU na mmekorita ya na UWI, ga -azụlite ọgbọ na -esote njem nlegharị anya mba ụwa na onye isi ile ọbịa, site na mmemme mmụta mahadum na mmemme gụsịrị akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ ọhụrụ a ga -adị na Ogige ọdịda anyanwụ nke Mahadum West Indies, Mona na isi obodo njem nlegharị anya nke Caribbean nke Montego Bay.
Ebe kachasị mma, ụlọ ọrụ nyocha, Gordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism ga-enye ụmụ akwụkwọ ohere mmụta bara uru karịa klaasị. Stewart kwuru, "Nna m kwenyere n'ịmụ ihe site na ahụmịhe-'ọzụzụ ọrụ,' dị ka ọ na-ekwukarị." “Dị ka onye ọchụnta ego zuru oke na onye na -arọ nrọ ogologo ndụ, ọ maara na amụrụ ihe ịga nke ọma karịa ụlọ nzukọ; achọtara kama n'oge nyocha na nchọta. Ọ bụ ụgbọala a ga-akpali usoro mmụta klaasị nke ụwa, na-etinye ụmụ akwụkwọ ahụmịhe nke ụwa dịka akụkụ nke mmepe ha. ”
Itinye ego na agụmakwụkwọ abụrụla ihe dị mkpa SRI, ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ahụ ga-agbakwunye Mahadum Sandals Corporate, nke e hiwere iji nye ndị otu Sandals nke Caribbean nwere ohere iji melite na ịzụlite nka ọrụ ma nweta nzere mahadum na nke gụsịrị akwụkwọ. Stewart kwuru, "Mgbe anyị na -etinye ego na ndị Caribbean, anyị na -etinye ego na ọdịnihu mpaghara a."
40 maka 40 Initiative: Mmemme na -erite uru na ógbè ndị Caribbean
Agbanyeghị na ọ bụghị okwu mgbe e guzobere akpụkpọ ụkwụ afọ iri anọ gara aga, mmụọ nke ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya (CSR) bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ kemgbe mmalite ya. Adam Stewart kwuru, "njikọ dị n'etiti njem na ọdịmma nke ndị obodo Caribbean ebe anyị na -arụ ọrụ enweghị mgbagha." Na nsọpụrụ nke ụlọ ọrụ 40th ncheta, Sandals Resorts International, yana Akpụkpọ ụkwụ Sandals, nzukọ anaghị akwụ ụgwọ ewepụtara na 2009 iji nyere SRI aka ime mgbanwe na ndụ ndị Caribbean, na-akọwapụta ọrụ iri anọ kacha gosipụta njikọ dị ịtụnanya n'etiti njem-ụlọ ọrụ kacha emetụta mpaghara-yana ike ya ịgbanwe obodo Caribbean. ma melite ndụ.
A ga -ahọrọ ọrụ gafee mpaghara ise: ịkwado ndị ọrụ ugbo mpaghara, ọzụzụ ọbịa & asambodo ile ọbịa, ịchekwa akụ sitere n'okike, ijikọ aka ọrụ pụrụ iche na mgbasa ozi obodo. Site na mbọ nchekwa gburugburu ebe obibi na saịtị UNESCO World Heritage na Blue na John Crow na Jamaica na imeziwanye ikike nke ndị ọrụ ugbo iji welie mbọ ha na mmepụta nri na -adigide, isoro ndị ọrụ nka na -arụkọ ọrụ ọnụ iji bulie ikike ha, ndị otu akpụkpọ ụkwụ ga -atụgharị. aka ha iji weta ọrụ ndị a na ndụ ma na -akpọ ndị ọbịa ka ha sonye.
Mgbe ọ bụla n'agwaetiti - Na -ewebata akpụkpọ ụkwụ PalmCast
Sandals Resorts na-amalite mkparịta ụka ahụ wee debe Caribbean na mbido ya na pọdkastị mbụ ya, "Sandals PalmCast," na-enye ndị na-ege ntị nyocha nke ọma n'ihe niile na-eme n'ofe ebe ntụrụndụ nke nwere nkeji nkeji 13 ruo 20. nghọta ndị ọkachamara, nkọwa nlegharị anya, na ajụjụ ọnụ pụrụ iche nwere ihe ịtụnanya n'ụzọ. Site na nkezi ọnụego ndị ọbịa na -eru nso 50%, ndị ọbịa akpụkpọ ụkwụ na -akwụsi ike ma na -achọsi ike ịmụta maka ihe ndị mere na nso nso a na Caribbean site na Sandals Resorts, onye nnọchi anya akara ngosi Caribbean.
Ndị nọ n'ụlọ, ndị ọbịa nwere ike isonye na mmemme ahụ na ebe a na-ere akpụkpọ ụkwụ niile na-enweghị isi, gụnyere:
Site na OG ruo Pụrụ Iche - Mgbe ahụ & Ugbu a Cocktails Custom & Ọrụ Ọdọ Mmiri Ọhụrụ
Dị ka ndị mepụtara mmanya na-egwu mmiri, akpụkpọ ụkwụ maara otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara ịwụnye mmanya mmanya n'akụkụ ọdọ mmiri. Akara ahụ na -eme ememme site na imepụta ọkacha mmasị ọhụrụ yana iweghachite ụfọdụ ndị mbụ. Ndị ọbịa nwere ike gbadara ebe nchekwa ka ha na-agụgharị menu mmanya n'akụkụ akụkụ nke 1981/2021 ka ịgbanwee n'etiti ihe ụtọ na-ejighị igwe oge iji ruo ebe ahụ. Ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ niile ga-amalitekwa ọrụ ọdọ mmiri ọhụrụ na-eje ozi menu nri nri na mmanya sitere n'ike mmụọ nsọ ka ndị ọbịa nwee ike nọrọ n'akụkụ ọdọ mmiri ruo ogologo oge. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ theụ throughoutụ niile ga-ebupute ahụmịhe mmanya ọhụrụ ejiri aka mebere nke gụnyere mmanya ọhụrụ a gwọrọ agwọ site na iji ngwakọta pụrụ iche, mmanya na-aba n'anya, ihe ọhụrụ, na ahịhịa ejiri aka wepụta site na ugbo mpaghara.
Ihe omume akpụkpọ ụkwụ na -alaghachi azụ
Ndị ọbịa akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịkpa oke dịka ọ bụ 1981 na ememme ọdọ mmiri pụrụ iche kwa izu iji cheta afọ iri anọ na -atọ ụtọ. Ndị ọbịa nwere ike ịmịkọrọ anwụ ka oge gara aga na -eme ka ndụ dị ndụ site na DJ na -agba egwu sitere n'ike mmụọ nsọ na ndị na -ere mmanya na -enye mmanya nka nka nka.
Mkpokọta mkpọsa ụlọ ahịa ọgbara ọhụrụ na ụlọ ahịa ụlọ ezumike nka
Resorts Sandals na -ewepụta EST. T-shirt vinteji vintage 1981 na nchịkọta mkpọsa ahịa dị na ụlọ ahịa niile na-eme njem na Beach House. Ndị ọbịa nwere ike họrọ site n'ụdị iri na -adịghị ahụkebe na ọmarịcha na -asọpụrụ ụdị oge ntọala akpụkpọ ụkwụ, dị maka ịzụrụ malite na Nọvemba.
Na mgbakwunye na atụmatụ ihe onwunwe, ndị akpụkpọ ụkwụ nwere ihu ọma na-ahọrọ ndị na-akwụghachi ụgwọ na ndị ọrụ ndụmọdụ njem njem ogologo oge agbakwunyere ga-elekwa anya nri abalị ndị ọbịa na-alọta, a pụkwara ịkpọ ha ka ha sonye n'ọdụ ụgbọ mmiri ncheta ncheta afọ 40 n'ụgbọ mmiri ahụ. 'mbinye aka ụgbọ mmiri nke na -eme njem ụgbọ mmiri na -eme ememe n'akụkụ oke osimiri ọwụwa anyanwụ n'afọ niile.
Iji mụtakwuo maka ka Sandals Resorts na -eme ememme ncheta afọ 40 ya na iji mee ka ọ mata na ihe ịtụnanya ndị ọzọ ga -abịa, jide n'aka na ị gara ebe a.
Ịdebe ọnụnọ na Resorts Sandals, gaa na ebe a.
Sandals® Ebe ntụrụndụ
Sandals® Resorts na -enye mmadụ abụọ ịhụnanya kachasị, ahụmịhe okomoko Luxury Inc® n'ime Caribbean n'ofe ntọala ihu mmiri iri na ise ya dị mma na Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, na ọnọdụ ọhụrụ nke 15 na -abịa na Curacao Eprel 16. Na-eme ememme afọ iri anọ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe ezumike niile na-enye ntinye dị mma karịa ndị ọzọ nọ na mbara ala. Resorts Sandals naanị gụnyere mbinye aka Love Nest Butler Suites® maka njedebe nzuzo na ọrụ kacha; butlers zụrụ site na Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 2022-Star Global Gourmet ™ na-eri nri, na-ahụ maka mmanya dị n'elu, mmanya dị oke ọnụ, na ụlọ oriri ọpụrụiche gourmet; Ụlọ ọrụ Aqua nwere asambodo na ọzụzụ PADI® ọkachamara; Wi-Fi ngwa ngwa site n'ụsọ osimiri ruo ime ụlọ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ a na-ahazi. Resorts Sandals na -ekwe ndị ọbịa udo nke obi site na mbata ruo ọpụpụ Protocols Sandal nke Platinum nke linessdị Ọcha, usoro ahụ ike na nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ emebere iji nye ndị ọbịa obi ike kachasị mgbe ha na-eme njem na Caribbean yana mmachi ọhụụ akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ, mmemme nchedo ezumike zuru oke nke na-egosipụta nkwa ụlọ ọrụ nke mbụ maka ezumike nnọchi n'efu gụnyere ụgbọ elu maka ndị ọbịa emetụta. site na nkwụsịtụ njem COVID-19 metụtara. Sandals Resorts bụ akụkụ nke Sandals Resorts International (SRI) nke ezinụlọ, nke mbubreyo Gordon “Butch” Stewart hiwere, nke gụnyere ebe ezumike osimiri na-agbakwasị ụkwụ na ezinụlọ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọdịiche akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Resorts Luxury Include®, gaa na sandals.com.